10 inch mmiri mmiri na ọnụ ahịa ahịa | Rayson
N'akpa uwe Spring matarasị
Bonnell mmiri matarasị
Memory ụfụfụ matarasị
Pu ụfụfụ matarasị
Akpọrọ Bonnell Spring matarasị
Akpanwu n'akpa uwe Spring matarasị
Mattlọ oriri na nkwari akụ
3 kpakpando Star Star
4 kpakpando Star Star
5 kpakpando Star Star
Usoro ndina Bed
Bedlọ Ndina Hotel
Ohiri Isi Series
Polyester Fiber Ohiri Isi
Ohiri Isi Latex
Memory ụfụfụ Ohiri Isi
FOAM na matraasi A ghọtara maka ike ya iji mepụta ahụ ahụ na-ehi ụra na-akwado ahụ ọkụ, nke na-egosi na ọ na-enye ọ bụla dị mkpa na-ehi ụra nke ọma - ihe na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-agaghị ahụ. Mmekọrịta na-eduga na usoro dị elu na-ewu ewu na-eme ka ọ na-efe efe ma na-egbochi ihe mgbu sciatic.
Meta New Valelelastic eke na-enye ya ohere ịzaghachi nke ọma n'obodo, nke na-atụgharị n'ime oke iche
Dịka m kwuru n'elu, ịdị nwayọ nke mitraam ebe nchekwa na-emetụta njupụta ya - mgbe 4 lb.ft. Ọ bụ na opekempe nke ị kwesịrị ịnwa ịchọ ma ọ bụrụ na ịchọghị ị nweta sag n'ime afọ mbụ, anyị na-akwado ịga opekempe 5 lb.ft. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ngwaahịa nke ga-adịgide ogologo oge.
Nnukwu mmiri Bonnell spring matstress
matrasị nke ụlọ oriri na nkwari akụ
Ulo olu nke igba otutu Pocket Spring Mattress
Gel Memory Foam & Foam siri ike mechiri
Nkọwa nke ngwaahịa
Na Rayson, Mmelite teknụzụ na ihe ọhụrụ bụ uru anyị. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. 10 inch match nke oge opupu ihe ubi etinyela ọtụtụ ihe maka mmepe ngwaahịa na ndozi oke ọrụ, anyị edobela aha dị elu na ahịa. Anyị na-ekwe nkwa inye onye ahịa ọ bụla ndị ahịa n'ụwa niile na ọrụ ọrụ aka na-ekpuchi ihe ndị ahịa, ahịa na ọrụ ahịa. N'agbanyeghị ebe ị nọ ma ọ bụ azụmahịa ị na-etinye aka, anyị ga-enwe mmasị inyere gị aka imeri okwu ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ gbasara ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọnwa iri na ụma anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Yabụ ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ụdị mmetụta ndị a, ha ga-amasị ha.
Ziga ajụjụ gị
*Aha Ụlọ Ọrụ